lahatsoratra 89 119 amin’ny teny malagasy
An'aliny no isan'ny sinôgrama, na dia fiovana madinika ny sinôgrama hita ao amin'ny andinin-teny taloha aza ny ankamaroan'izy ireo. Ny fanadihadiana tao Sina dia maneho fa ny fahaiza-mampiasa ny soratra sinoa dia mila ny fahafantarana sinôgrama telo hatramin'ny efatra arivo. Ao Japana dia 2.136 no isan'ireo kanji (anaran'ny sinôgrama amin'ny teny japoney) ianarana any am-pianarana. Kanji maro noho izany anefa no tena fampiasa amin'ny fiainana mandavanandro. Maro ireo lisitra sinôgrama tokony fantatry ny tsirairay, ary samy manana ny azy ny firenena mampiasa ny soratra sinoa ; ny soratra nentindrazana dia mbola ampiasaina ao Taiwan, Hong Kong, Macao ary Korea Atsimo. I Japana dia manana ny fombany manokana hanatsorana ny sinôgrama, izay mbola akaiky amin'ny soratra sinoa nentindrazana noho ny soratra sinoa notsorina izay fampiasa ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Na dia misy aza ny fanatsorarana ataon'ny japoney (izay antsoina hoe shinjitai), ireo soratra tsy fahita matetika dia soratana amin'ny fomba nentindrazana ihany (kyūjitai), izay mitovy tsy misy valaka amin'ny soratra nentindrazana.
Ao Korea Atsimo dia mampianatra ny soratra sinoa amin'ny ambaratongam-pianarana voalohany hatramin'ny faran'ny ambaratonga faharoa na dia tsy fampiasa isan'andro toa ny any Japana sy ny firenena hafa ao amin'ny sinôsfera aza izy ireo. Eo amin'ny 1.800 eo ho eo no isan'ny soratra sinoa ampianarina eny am-pianarana. (tohiny...)
10 Desambra − Andron'ny zon'olombelona
1799 : Mampiasa ny rafi-drefy metrika ho an'ny refy aman-danjany i Frantsa